Kedu ka esi hụ backlinks uto na Google Analytics?
Nchịkọta Google bụ otu n'ime ọkachamara ọkachamara ọkachamara na-enye webmasters niile data achọrọ gbasara metrics na ebe nrụọrụ weebụ na SERP. Ọ na-enye ohere iji hụ na ihe ịga nke ọma nyochaa njikwa search engine ma nweta nkwubi okwu kwekọrọ na ozi natara. Ihe ọzọ bara uru nke nchịkọta nchịkọta Google a bụ ike ịgbaso ntanetịime weebụ - best telehealth companies. N'etiti nsonaazụ ndị ọzọ na-akpọ aha referrals. Ọ bụ ya mere ọ bụ ihe ị ga-eji chọọ nyocha gị.
Akụkụ a na-etinye aka n'ihe ọmụma ahụ iji hụ backlinks na Google Analytics na otu esi esi dị iche na ha site na mma na isi iyi. Ya mere, ebe a ka anyị na-aga.
Nzọụkwụ iji hụ ma chekwaa backlinks na nchịkọta akụkọ Google Analytics
Nhọrọ profaịlụ Google ziri ezi
Na nhazi mbụ nke gị na GA, ị ga-achọ ijide n'aka na ị na-eji akaụntụ ziri ezi, profaịlụ, na echiche dịka ị nwere ike ịnwe ọtụtụ profaịlụ ebe a na ọtụtụ ọrụ dị iche iche nke nwere ike ime ka ezigbo ọgba aghara. A ga-edebe saịtị ahụ ị na-arụ ọrụ ugbu a na aka nri nke ibe. Ikwesiri igodo ya wee họrọ ihe kwesiri ekwesighi.
okporo ụzọ azụ azụ ebe a na-ahazi site na data nnweta. Nzọụkwụ ndị a ga-enyere gị aka ịnyagharịa akụkọ redlink gị n'ụzọ ziri ezi:
Pịa "Nnweta" na aka ekpe aka iji chọpụta ihe niile ị nwetara;
Họrọ "All Traffic" dropdown;
Pịa bọtịnụ "Ntuziaka".
Ozi nchịkọta akụkọ ga - enye gị data backlinks
A pụrụ ịchọta ebe ị ga - esi na - ezigara na ngalaba Google Analytics nke a na - akpọ " Ozi Ntughari. "N'ebe a, ị ga-ahụ ihe niile achọrọ gbasara data azụ gị na isi mmalite ebe ha na-edebe ya.
Usoro bara uru maka ịlele backlinks na GA
E nwere ụfọdụ usoro ndị dị elu ị nwere ike ime na-agụ akụkọ backlink gị na GA.
Tinye oghere ndị na-ege ntị
Iji mechie nchọpụta backlinks gị ma nyekwuo nkọwa zuru oke, mejuputa akụkụ nke ndị na-ege ntị. Usoro Google Analytics a ga - enyere gị aka ịkwụsị ụdị ndị ọbịa dị iche iche na - abata na saịtị gị site na backlinks.
Iji kewaa backlinks gị, soro usoro ndị a:
Pịa bọtịnụ "Tinye ngalaba";
Jiri igbe nchọta;
Wee pịa bọtịnụ "Tinye" iji gosi;
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-ahụ pasent nke ndị na-ege ntị na nke ọhụrụ na ntinye data.
Ngalaba nke mbụ
Iji lelee ihe ndabere backlink gị, i nwere ike iji " "Ọrụ GA. Isi ihe na ndabara bụ isi iyi. Na taabụ a, ị nwere ike ịhụ mpaghara azụ azụ. Iji nyochaa akwukwọ backlink, ị dị mkpa ka ị pịa otu n'ime ngalaba. Site na ime nke a, ị ga-enwe ike ịhụ ụzọ ntinye aka nke njikọta gị.
Mgbe ị nyochachara ihe niile na-abata azụlinks, ị nwekwara ike lelee ebe ị ga-esi nweta ebe ị ga-enweta. I nwere ike ime ya, na-agbaso usoro ndị a:
Pịa na "Ịda Page";
Mgbe ahụ hụre peeji nke ọdịda;
Lelee nnweta gị, akparamàgwà, na data ịgbanwere; (ị nwere ike ịlele data ndị a na-aga n'ihu).